Announcements – Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Faculty of Medicine and and Surgery
Faculty of Health Sciences and Tropical Medicine
WARGELIN: Imtixaanka Soo Gelida Jaamacadda Umadda…
Dhamaan ardayada iska diiwaangelisay Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed (JUS) sanad waxbarashadeedka 2021– 2022, waxaa la ogaysiinaya in imtixaanka soo gelidda JUS la qaban maalinta Sabdiga (04-September 2021) saacadu marka ey tahay 7:00 subaxnimo Waqtiga Muqdisho. Ardayda waxa ay imtixaanka ku gelidoonaan xarumaha hoos ku xusan: 1- Ardayda wadata Roll Numbarka kaarka gelida imtixaanka (JUS7602/21 ilaa JUS8334/21)…
OGEYSIIS: Baridda Luqadda Talyaaniga
Announcements, NewsLeave a comment
Jaamacada Ummadda Somaaliyeed (JUS), waxay ogaysiinaysaa dhammaan ardayda JUS, in bisha September 2021 la bilaaabi doono duruusta barashada af-Talyaaniga. Koorsooyinku waxay u furan yihiin in ay ka soo qayb gali karaan dhammaan shaqaalaha iyo ardayda kulliyadaha JUS. Duruustana waxaa lagu qaban doonaa Xarunta Shabelle. Wixii macluumaad dheeri ah waxaa laga heli karaa wakhtiga is-diiwaangelinta, tasoo…
Araaji Qabashada Dufcada 2-aad, ee Culuumta Siyasadda (Political Science)…
OGAYSIIS: ARAAJI QABASHADA ARDAYDA CUSUB EE JAAMACADDA OO BILAABATAY
Dhammaan Ardayda rabta inay ku soo biirto Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed sannad tacliimeedka 2021-2022, waxaa la ogaysiinayaa in qabashada araajida codsiga ay bilaaban doonto 24/07/2021 insha allah . F.G 1- Ardayda Sanadkan ku baastay Imtixaanka Shahaadiga waxay isku diiwaangelin karaan Rool Lambar iyo Kaarka aoonsiga ay ku galeen imtixaanka Sannad Dugsiyadeedka 2021/2022 ee Wasaaradda Waxbarashada .…
Ogeysiis (Barnaamijka Takhasuska ee Qaanuunka)
Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waxay idinku bishaareyneysaa inay bilaabeyso, Barnaamijka Takhasuska ee Qaanuunka (Master degree of law). Jaamacaddu waxay ku bilaabeysaa labo qeybood oo takhasus ah oo ardaydu kala dooran doonaan,kuwaasoo kala ah: MAJOR IN SOMALI LEGAL STUDIES, MAJOR IN PUBLIC AND ADMINISTRATIVE LAW. Shuruudaha laga rabo ardayga soo codsanaya Masterka Qaanuunka ee JUS waa: Inuu…
Araaji qabashada dufcadii labaad ee Diplomsha sare ee Cilmiga Caafimadka Guud (Post Graduate Diploma in Public Health leading to Master Degree) Shuurdaha Laga rabo qofka soo codsanayo waa:- In uu heesto shahaadada Bachelor ee maadooyinka sida : Daaweynta iyo Qaliinka (Bachelor of Medicine and Surgery), Cilmiga Ilkaha(Bachelor of Dental Science), Cilmiga Daawada(Bachelor of Pharmacy), Cilmiga…
OGEYSIIS Jaamacadda Ummadda Somaaliyeed waxay qaadanaysaa dufcaddii 6aad ee Diplomaha sare ee Qaanuunka (Post Graduate Diploma in Law) Muddada qabashada araajidu waxay ku egtahay 25/11/2020 Shuruudaha Laga rabo qofka soo codsanayo waa 1. In uu heysto shahaado Bachelor ee maadooyinka sida Sharciga iyo Qaanuunka ama Artska la xiriira. 2. Qofkii heysto shahaado cilmi ah…
Araaji Qabashada Dufcada 2-aad, ee Culuumta Siyasadda (Political Science) oo Bilaabatay
Jaamacada Ummada Soomaaaliyeed, waxay Bulshada Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada Sare ee (Postgraduate) ugu Bishaaraynaysaa in ay Qaadaneyso Dufcadii Labaad ee Culuumta Siyasadda (Political Science) . Hadaba Shuruudaha Laga Doonayo Ardeyga Soo Codsanayo Waa : Inuu heystaa shahaadada heerka koowaad ee Jaamacadda (Bachelor degree) isla markaana la xiriirtaa Culuumta Bulshada. Inuu keenaa shahaadada asalka ah iyo…
In ka badan 2000 arday oo ku guulaystay Imtixaanka soo gelida JUS oo soo dhawayn loogu sameeyay …